Maitiro & kutsvaga kwezvinyorwa pane iyo nyaya:hutano
Sras: zviratidzo, kudzivirira uye kurapwa
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) rudzi rwakanyanya rwehutachiona pneumonia hunokonzerwa neSARS coronavirus. Utachiona hunokonzera SARS hwakatanga kuzivikanwa muna 2003, uye World Health Organisation yakaratidza SARS sekutyisidzira kwehutano hwepasi rose. Muna 2003, chirwere chakauraya vanhu
Porphyrin weti bvunzo: mhando uye maitiro
Kuedza Porphyrins Kuongorora Porphyria Porphyrins makemikari echisikigo anowanikwa mumuviri wako. Ivo chikamu chakakosha chemabasa mazhinji mumuviri wako . . Kazhinji muviri wako unogadzira mashoma mapherifini kana uchigadzira heme. Heme chinhu chakakosha chehemoglobin, iyo puroteni mumasero matsvuk
Chirwere chaPasinson: kuziva zviratidzo
Goverana nezvePinterest Chirwere chePasinson chirwere chinopfuurira chetsinga. Vanhu vane chirwere chePasinson vane zviratidzo zvakasiyana zvepanyama, zvekuziva uye zvepfungwa. Kazhinji zviratidzo zvekutanga zvehosha yaPasinson zvinonyengera zvekuti chirwere chinoenda chisingaonekwe kwemakore. Sezvo
Zviratidzo, bvunzo uye kurapwa kweNickel allergies
Share on PinterestTetra Mifananidzo / Chii chinonzi nickel allergy Nickel isimbi ine ruvara-rwesirivheri iyo inowanikwa musango nharaunda. Inowanzo sanganiswa nezvimwe simbi kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira: zvishongo, mari, nharembozha, magirazi emaziso, mapepa emapepa, orthodo
Imbwa dzakanakisa dze hypoallergenic kune vanorwara neutachiona
Goverana paPinterest Kune vanhu vazhinji vane allergies, kuva nembwa kana katsi kunogona kunge kwakaoma. Kunyangwe kushanyira shamwari kana hama dziri varidzi vezvipfuyo kunogona kunge kwakaoma zvakanyanya. Kana iwe uri weergoria kune pet dander, iwe unogona kuwana maziso emvura, kusemura, kurira, k